အဘယ်ကြောင့်အီတလီမှာဆောင်းရာသီရထားခရီးသွားတစ်ဦးကမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်ကြောင့်အီတလီမှာဆောင်းရာသီရထားခရီးသွားတစ်ဦးကမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်
ရထားမသက်ဆိုင်ရာသီအီတလီမှာခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း. သို့သျောလညျး, သူတို့ဖြစ်ဖို့သက်သေပြ ဘေးကင်း နှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေ option ကို, အထူးသဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာ. အီတလီမှာဆောင်းရာသီမီးရထားခရီးသွားလာသာဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းဖွင့် အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထိရောက်.
ညာဘက်အီတလီ၏ဗဟိုကဆင်းထိုကဲ့သို့သော Trenitalia ပြေးအဖြစ်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများ. Trenitalia Frecciarossa ဟုခေါ်သည်, လိုင်းပေါ် မူတည်၍ Frecciargento သို့မဟုတ် Frecciabianca. ရထားများသည်အီတလီရှိမြို့သို့မဟုတ်မြို့တိုင်းကိုနီးနီးကပ်ကပ်ချိတ်ဆက်ထားသည်, တစ်ခုချင်းစီကိုဦးတည်ရာ၏ဗဟိုရန်သင့်အားယူပြီး. နာပိုလီ - ပင်မမှတ်တိုင်များ Salerno များမှာ (Naples) - ရိုးမား (ရောမမြို့) - Florence (Florence) - Bologna - မီလန် (မီလန်) - Torino (တူရင်). ဗင်းနစ်မှရောမမြို့ချောမွေ့ဖြစ်ပါသည်3နာရီနှင့် 45 မိနစ်ခရီးကိုတစ်ဦးအနေဖြင့် Florence ကနေခရီးစဉ် ရောမမြို့မှတစ်ဦးမျှသာဖြစ်ပါသည် 1 နာရီနှင့် 32 မိနစ်များ.
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြန်နှုန်းနှင့်အဆင်ပြေအီတလီမှာဆောင်းရာသီရထားခရီးသွားများအတွက်သော့ချက်, သင်တို့ရှိသမျှသည်နိုင်ငံ၏သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ထိပ်တန်းနေရာများ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အငြိမ့်. ဤတွင်ဒီရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအီတလီမှာရထားသွားရောက်ထိပ်ဆုံးငါးမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည်.
1. Naples – အီတလီမှာဆောင်းရာသီရထားခရီးသွားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်တံဖြစ်ပါသည်
နေပယ်ပယ်သွားချမ်းထံမှရချင်သောသူတို့အဘို့စံပြဖြစ်. ဒါဟာ Naples အတွက်အမြဲနေသာင်! ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်, Naples အီတလီနိုင်ငံအားလုံးကိုအခြားမြို့များအထက်တွင်ထွန်းလင်း. သူတို့ကအဝေးသင့်ရဲ့အသက်ရှုယူလိမ့်မည်ဟုခရစ္စမတ်ဘွားရာမြင်ကွင်းများရှိ. သူတို့ကိုသင်မြို့အပေါ်မှာအားလုံးမြင်ရပါလိမ့်မည်. အတော်များများကအလှဆုံးတဦးတည်းမှာသဘောတူကြလိမ့်မည် စန်း Gregorio Armeno မှတဆင့်.
ဒါကြောင့်အတိုများနှင့်တစ်နာရီနှင့်တစ်နှစ်ခွဲကြောင့် Tuscany ဖို့ရောမမြို့ကိုအီတလီမှာဆောင်းရာသီရထားခရီးသွားတစ်ဦးကထိပ်တန်းလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည် ရထားစီးနင်း ကွာ. သငျသညျအီတလီရဲ့မြို့တော်၌သင်တို့၏တစ်ရက်အားလပ်ရက်ရောင်းအားခံစားနှင့်လာရောက်လည်ပတ် start နိုင် ဗာတီကန်ပြတိုက်. နေ့လည်စာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးရထားပေါ်နှင့်ထက်နည်းနှစ်နာရီအတွင်းခုန်နိုင်, ပါ Tuscany အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေ. ယူမယ့် အပူထဲမှာသို့ကျဆင်းလာ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုချွတ်ထုပ်ဖို့ရေ Spa မ်ား.
သငျသညျ dreary ဆောင်းရာသီရှာဖွေအေးကိုမုန်းလျှင် ရာသီဥတု; ထို့နောက် Palermo မှခရီးသွားလေ့ကျင့်. စစ္စလီကျွန်းရှိအေးမြသောမှသင်၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ် မြောက်ပိုင်း အဲဒါကိုပိုမိုနီးကပ်စွာခံစားရသည့်လေထုကမ်းလှမ်းအဖြစ်ဥရောပ နွေရာသီ သို့မဟုတ် နွေဦး. သင်တို့သည်လည်းအထောက်အကူပေမယ့်မြို့ရဲ့ခရစ္စမတ်စျေးကွက်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျမပေးနိုငျ, ဘွားရာမြင်ကွင်းများ, နှင့်အလယ်ခေတ် တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်း.
အအေးမိလျှင်တူရင်မြို့မြောက်ဘက်ကိုတက်ခေါင်း နှင်းလျှောစီး ထွက်ပြေးဖို့ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလပျော်စရာသင့်ရဲ့ idea က. တူရင်ဟာအဲလ်ပ်တောင်တန်းမှအီတလီနိုင်ငံတံခါးပေါက်၌သင်တို့၏ဆောင်းရာသီရထားခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်. လက်လွတ်မနေပါနဲ့ Lucy d'Artista. ဒါဟာနှစ်စဉ်ခေတ်ပြိုင်အနုပညာရဲ့ တင်ပြ ကြောင်းအံ့မခန်းအလင်းတပ်ဆင်နှင့်အတူမြို့တက်ထွန်း.
ဗင်းနစ်အတွက်ဆောင်းရာသီစင်ကြယ်သောအဓိပ်ပာယျ, ၎င်း၏လှပမှုကနေသင်တို့ကိုအာရုံမှကြည်လင်ပြတ်သားစွာလေထုနှင့်နည်းပါးလာလူအစုအဝေး. နှစ်ထပ်ကိန်းမှာကြိုးတပ်စီးနင်းသို့မဟုတ်ငုံအရင်သောက်ကော်ဖီခံစားကြည့်ပါ. သင့်ရဲ့ဗင်းနစ်အတွေ့အကြုံကို ပို. ပင်မှော်အောင်အလင်းနှင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေအမြဲရှိတယ်.
ကြိုတင်မဲအတွက်လက်မှတ်များဝယ်ယူသင့်ဘဝကိုဒီထက်စိတ်ဖိစီးမှုစေသည်. အဘို့ ခရီးဝေးရထား ထိုကဲ့သို့သော Frecciarossa အဖြစ်, Frecciargento, frecciabianca, သီးသန့်ထိုင်ခုံမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်.
ဘူတာရုံမှာလူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးလက်မှတ်ဝယ်ယူအမြဲတစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, ရှည်လျားသောလိုင်းများနှင့်အဆင်မပြေဘို့ပြင်ဆင်ရမည်နှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများ. ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်မှာတော့, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကြိုတင်ယူထားရန်အစံဖြစ်လာမယ့် အွန်လိုင်းရထားထိုင်ခုံ. အခါသင့်လက်မှတ်ဝယ်နိုင်မည်မျှကြိုတင်မှကြွလာ, အဖြေအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ် အီတလီရထား.
Frecce ရထားများမှာ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား အီတလီနိုင်ငံရဲ့အဓိကမြို့ကြီးများအကြားကြောင်းပြေး. သင်လုပ်နိုင်သည် အဖြစ်အစောပိုင်းသင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ် သင့်ရဲ့ခရီးသွားနေ့စွဲမတိုင်မီလေးလအဖြစ်. မကြာသေးမီက, Trenitalia က၎င်း၏ဘွတ်ကင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုတိုးမြှင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်6ရှေ့ဆက်လအတွင်း.
ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံဘွတ်ကင်လုပ်ရန်, သငျတို့သပင်အချို့သိသိသာသာဈေးလျှော့ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲများ၏သေချာလျှင်လျှော့အဖြစ်သင့်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်ကြိုတင်လက်မှတ်များပုံမှန်အားဖြင့် Non-ပြောင်းလဲနှင့် Non-အမ်းများမှာ. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကိုဆက်သွယ်ပါ အီတလီနိုင်ငံရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရထားခရီးသွားအပေါ်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုများအတွက်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူပြီးရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ link ကို ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-train-travel-italy%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / es ဖို့ / zh-CN ကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများနိုင်ပါတယ်.
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys အကြံပေးချက်များ trainjourney Tranride ရထား traintip ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား travelitaly